Sheeko Archives - Boga Wise Man
Waxay ahayd maalin Sabti ah. Sabtidana waxaan caado u lahaa in aan hurdada ku raago. Maalintaa iyada ah se hore ayay iiga dhamaatay. Ku noqo ayaan is idhi waanse ku noqon kari waayey. Cabbaar ayaan sariirta iska jiifay oo internet-ka iska dhex mushaaxay. Waan kacay ugu dambeyn oo soo cadeyday, maydhay, dhar nadiif ahaa oo […]